China Brass Izahlulo mveliso kunye nabenzi | Khokela
Ukuba unayo iinxalenye zobhedu kufuneka senziwe ngomatshini, singomnye wemithombo efanelekileyo kwaye efikelelekayo, kwaye sinokuwenza kakuhle umsebenzi.
Ziziphi izinto ezifanelekileyo zobhedu?
I-Brass yenziwe ngobhedu kunye ne-zinc alloy, eyakhiwe ngobhedu, i-zinc ibizwa ngokuba yibhedu eqhelekileyo, ukuba inezinto ezininzi zealloys ezaziwa ngokuba lubhedu olukhethekileyo.
Yeyiphi Isicelo esenza iBrass isetyenziselwa yona?
I-Brass inokusetyenziswa okubanzi, inokwenziwa itanki yamanzi, ukulungiselela imibhobho yokuhambisa amanzi, iimedali, imfutho, ityhubhu yenyoka, i-condenser, amaqokobhe kunye neemilo ezahlukeneyo zeemveliso ezibomvu.
Iindawo machining Brass zinezibonelelo ezininzi ezingundoqo xa kuthelekiswa machining ezinye izinto. I-Brass eguqukileyo iinxalenye kunye nezinto zihlala ixesha elide, zibiza iindleko, kwaye zide zenze itywina eliqinileyo lokufakwa. Ukongeza, ubhedu machining kunye neendawo eziguqukayo zinobushushu obukhulu kunye nokumelana! Okubaluleke ngakumbi, iinxalenye zomatshini wobhedu weCox wokuLungisa zilula kumatshini kwaye zijoyine, kwaye zenziwe iinkcukacha zakho kunye nemigangatho!
Brass Machining Izicelo
Ubhedu machining isetyenziswa kuluhlu olubanzi lwezicelo kunye namashishini, kubandakanya ezonyango, zombane, imibhobho yamanzi, kunye neempahla zabathengi. Iinkampani zikhetha ubhedu obuncinci obuguqulweyo bezinto kunye nezinto kuba sesinye sezona zixhobo zilula kumatshini, iindleko ezifanelekileyo, kwaye zihlala ixesha elide. Izixhobo zobhedu ezenziwe ngomatshini zihlala zisetyenziswa kwizixhobo ze-elektroniki ngenxa yamandla asezantsi kunye neepropathi zobunzima. Izicelo zobhedu olongezelelekileyo zibandakanya ubunjineli, imibhobho yamanzi, kunye nomsebenzi womphunga kuba izixhobo zobhedu ezenziwe ngomatshini zinomlinganiso ophantsi wokungqubana kunye neepropathi zokumelana ne-corrosion ephezulu. I-Cox Manufacturing iyawaqonda onke amashishini kunye nenkcazo yesicelo kunye nemigangatho, yiyo loo nto siyinkulumbuso yomvelisi weenxalenye zobhedu.
Izahlulo Brass Common ngomshini
● izixhobo umbhobho
● nokufakwa izilinganisi
● Izixhobo zeBrass
● ucinezelo neZilinganisi
● izixhobo Bulkhead
● izixhobo ukujikajika
● Izixhobo zeGrunner
● Izixhobo zeentshulube
● Izixhobo zomculo
● Uxinzelelo lwe-Orifice
● Kwaye ezininzi iindawo zobhedu zesiko
Wuxi Lead Precision Oomatshini wenza iindawo zobhedu usebenzisa iinkqubo ezininzi ezahlukeneyo: umatshini, wokugaya, Ukujika, ukubhola, ukusika i-laser, i-EDM, Ukunyathela, iphepha lesinyithi, ukulahla, ukuqulunqa, njl.
Egqithileyo Ukuguqula i-CNC
Okulandelayo: Izahlulo zentsimbi yeStaniless